Wefti ka socda Iiraan oo Muqdisho yimiday iyo Alshabaab oo dhalinyaro ciqaabtay | Somaliland Post
Home News Wefti ka socda Iiraan oo Muqdisho yimiday iyo Alshabaab oo dhalinyaro ciqaabtay
Wefti ka socda Iiraan oo Muqdisho yimiday iyo Alshabaab oo dhalinyaro ciqaabtay
Muqdisho (SLPOST)- Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Iiraan Cali Akbar Saalixi iyo Wefdi uu hoggaaminayo ayaa shalay soo gaadhay magaalada Muqdisho, waxaanu kulammo la yeeshay Madaxda Dawladda Ku-meel-gaadhka ah ee Soomaaliya, isla markaana waxa uu booqday qaar ka mid ah Xeryaha Barakacayaashu jiraan ee isla Muqdisho.
Dr. Cali Akbar wuxuu sheegay in dalkiisa Iran uu dhaqaale gaadhaya 25-milyan oo Doollar ugu deeqay shacabka Soomaaliyeed si loo caawiyo shacabka dhibaateysan ee ay ku habsadeen Abaaraha iyo colaadda mudda dheer dalkooda ka socotay.
Wasiirka oo ay wehliyeen xubno ka tirsan dowladdiisa iyo ururka Bishan Cas ee dalka Iran ayaa waxay Muqdisho keeneen Deeq gargaar ah oo loogu talogalay in loo qaybiyo shacabka Soomaaliyeed ee dhibaateysan.
“Halkan waxaan u imid inaan arko dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan, waxaana dalkaygu uu ugu deeqay 25-milyan oo Doollar si wax loogu qabto.” ayuu yidhi Wasiirka ammuuraha dibadda ee dalka Iran Cali Akbar oo Saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Weftiga uu hoggaaminayay Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiran ayaa kulan kula yeeshay xarunta Madaxtooyada Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali, iyadoo kulankaas ka dib uu Ra’iisul wasaaruhu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaanshaha Waftiga Iran.
Socdaalka Wasiirka iyo xubnaha la socday oo hal maalin ahaa ayaa dib uga dhoofay Muqdisho, waxaana socdaalkiisu uu ku soo beegmay iyadoo dhawaan ay Muqdisho gaadheen madax sare oo ay ka mid ahaayeen Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale, Madax ay ka mid yihiin Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska iyo Guddoomiyaha Midawga Afrika.
Sidoo kale, dadka Soomaliyeed ee dunida dacalladeeda ku kala nool ayaa durba bilaabay inay u soo laabtaan dalkooda hooyo, gaar ahaan Caasimadda Muqdisho oo hadda inteeda badan nabadgalyo ka jirto. Waxa maalmahan u dambeeyey Caasimadda dalka Somaliland ee Hargeysa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa dadka hore uga soo barakacay dalka Soomaaliya oo hadda bilaabay inay ku laabtaan Muqdisho. Waxa cidhiidhi badan laga dareemayaa Duullimaadyada Diyaaradaha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ka tagaya ee u duulaya Muqdisho.
Dib ugu noqoshadan Muqdisho ee ay bilaabeen Shacabka Soomaaliyeed ee hore dalka uga maqnaa oo intooda badani ku filiqsan dalalka Soomaaliya la jaarka ah, ayaa timi ka dib markii ay Malleeshiyada Al-Shabaab oo dhibaatooyin fara badan oo dil, dhac,dhaawac, curyaamin cago iyo gacmo goyn ah, cabbudhin iyo cidhiidhi badanna ku hayey bulshada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku dhaqan, iyada oo dadka Soomaaliya qaxa iyo barakaca ugu wacnaayeen dhibaatooyinkaasi. Haddaba, wax kasta oo dhacay waxa hadda dadka reer Soomaaliya u bilaabantay rejo cusub, waxaanay u muuqdaan kuwo hadda ka soo miiraabaya Suuxdinta niyad-jab labaatankii sano ee u dambeeyey haystay oo marba marka ka dambaysay Xummaddeeda ay la sii itaal-darraynayeen Shacabka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, Malleeshiyada Al-Shabaab, ayaa weli sii wadda xasuuqa dilka ah ee ay ku hayso shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada. Maamulkii Malleeshiyada Al-shabaab ee Muqdisho oo weli ka wada dhammaan magaalada oo meelaha qaar sii jooga inkasta oo laga saaray meelo badan oo Caasimadda ay ka maamulayeen, ayaa shalay xukun dil ah ku fuliyay saddex dhallinyaro ah oo ay ku eedeysay inay ahaayeen jawaasiis, waxaana xukunka dilka ah ku riday Maxkamadda maamulkaas hoostagta.
Saddexda dhallinyarada ah ee la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray: Cabdi Bakaal Macallin, Xuseen Maxamed C/llaahi iyo Ibraahim Maxamed Cabdi iyadoo lagu eedeeyay inay jawaasiis u kala ahaayeen dowladda KMG ah ee Soomaaliya iyo dowladda Kenya.
Fagaare ku yaalla degmada Dayniile ayaa xukunka lagu fuliyay, iyadoo dadweyne badan iyo Saraakiisha Al-shabaab ay goobta ku sugnaayeen, waxaana Qaaddiga Maxkamadda xukunka ridday uu sheegay in dhallinyaradan ay da’doodu u kala dhexeysay 16-sano illaa 31-sano.
Qaaliga Maxkamadda oo lagu magacaabo Sheekh Cumar ayaa sheegay in laba ka mid ah dhallinyaradan ay basaasiin u ahaayeen dowladda KMG ah ee Soomaaliya lagana qabtay Muqdisho, halka midka kale laga soo qabtay degmada Saakow ee gobolka Jubbada dhexe uuna jaajuus u ahaa dowladda Kenya. Kuwaasoo ay Toogteen Niman Malleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan oo Wejiyada duubtay.
Idiris Cabdiqadir - Modified date: June 29, 2016